युरोप, शोभा र दन्तिये को सुन्दर भूमि पक्कै जाने-गन्तव्य लागि हो हरेक यात्रा त्यहाँ बाहिर उत्साही. यात्रा गर्न अपार श्रद्धा Awakening स्थानहरू, युरोप विदेश सुन्दर हुन ज्ञात अध्ययन अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि हब रूपमा तटों को एक uncountable इनाम छ, द्वीप, महलों, महल, र ऐतिहासिक स्मारक.
सल्जबर्ग जर्मनी को सीमा मा स्थित छ, अष्ट्रिया को देश मा, र छ साँच्चै आँखा एक दृष्टि छ कि भारी पूर्वी आल्प्स द्वारा cuddled. यो चमत्कारिक र आफूलाई सानो सम्झने ज्ञात सुन्दर गन्तव्यहरू शहर Mozart को जन्म ठाउ छ, को famed संगीत कम्पोजर, जसको
एक antiquated शहर एक पटक के थियो, कन्स्टान्ट हाल रोमानियाको तेस्रो ठूलो हो शहर र युरोप मा अर्को कम ज्ञात सुन्दर गन्तव्यहरू, र कालो सागरको पश्चिमी किनारमा अवस्थित क्लेमोरिंग बन्दरगाह.
Constanta धेरै verifiable घर छ पर्यटक हटस्पट दशौं फिर्ता जा सताब्दी, को Ovid वर्ग सहित, जहाँ रोमन कलाकार को एक कांस्य मुर्ति Ovid खडा, र छोड्नुपऱ्यो Constanta क्यासिनो, जो कला को वास्तुकला विशेषताहरु Noveau. Constanta त्यसै शायद सबैभन्दा आनन्ददायी seashores छ, जहाँ तपाईं sunbathe मौका प्राप्त र loosen अप. मामला मा तपाईं एक adventurous छन् मुड, छन् बहु-दिन यात्राहरू Constanta देखि, जो गएर दुई समावेश यूनेस्को विरासत साइटहरु अर्थात् डेन्यूब र Tulcea एक मा अन्त तिर आराम साथ प्रसिद्ध समुद्र तट रिसोर्टमा, Mangalia.
सबै थप उल्लेखनीय बेल्जियम शहरी जस्तै समुदाय को छाया मुनि लुकेको आन्ट्वर्प र ब्रसेल्स, घेंट बेल्जियम मा एक लुकेका मणि छ. रोचक सहर संग र टाढा कम विकार, घेंट तपाईं आराम महसुस गर्न पर्याप्त सानो छ र आफ्नो अनुभव अप स्पाइस गर्न भारी पर्याप्त. तपाईं राम्रो संग्रहालयहरु को रुचाउनु हो भने, आधुनिक बारहरू, र नहर छेउमा दृश्य, तपाईं निश्चित आफ्नो यात्रा गर्न घेंट थप्न चाहनुहुन्छ हुनेछ यात्रा. बेवास्ता कि पर्छ छैन हुन ठाउँका एक भाग Gravensteen समावेश, नहरहरुमा र अचम्मको दृश्य संग एक दशौं शताब्दीका मकान, बेन्ट्री गेन्ट, र सेन्ट Baro गिरजाघर.
हेलसिन्की गएर आफ्नो सदैव समयमा विचार गर्मी दिन त्यहाँ आफ्नो समय बढाउने वा आफ्नो gutsy जूता धारण र blanketed जाडो सांझ लड्न. कुनै पनि मामला मा, त्यहाँ हेर्न ठाँउहरु यस्तो विशाल संख्या हो, तपाईं गर्न विकल्प छैन पूर्ण रूपमा सबै गोप्य कुरा प्रकट गर्नुहोस् यो राख्छ!
Gothenburg, स्वीडेन मा स्थित, Liseberg मनोरञ्जन पार्क घर छ, को को एक यस आफूलाई सानो सम्झने ज्ञात सुन्दर स्थल एक हुनुको albeit राष्ट्रलाई मा शीर्ष आकर्षण. यो पनि छ जो देश मा दोस्रो ठूलो शहर हो कारण देशमा दुवै समुद्र र यसको divergent यसको inclusiveness गर्न हसाउने परे "Fika" जस्तै अवधारणाहरु (कफी विश्रामहरू आनन्द लिई एक अवधारणा) र Feskekorka (माछा चर्च) आफ्नो अचम्मको संगीत तिहार साक्षी अगस्ट मा यस शहर गएर प्रयास बाटो बाहिर पश्चिम रूपमा ज्ञात. सम्भव छैन यो समयमा भ्रमण गर्न? शहर हुनेछ तैपनि सुन्दर sceneries तपाईंको सबै सचेत प्रसन्न रूपमा खडा,
क्रोएशियामा स्प्लिट भनेको छुट्टीको लागि उत्तम कम ज्ञात सुन्दर गन्तव्यहरू हो यदि तपाईं एक घटनाको खोजीमा हुनुहुन्छ भने। चिसो भू-मध्य वाइब संग तटीय शहर सङ्गत. को Dalmatian भोजन यहाँ को संग मिलेर ताजा समुद्री खाना तपाईंको सचेत दुलार र आफ्नो घुँडामा तपाईं प्राप्त हुनेछ!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Flesser-known-beautiful-destinations%2F%0A%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)